Gold Amigo Red: zava-pisotro vaovao ho an’ny rehetra | NewsMada
Nivoaka, nanomboka ny 19 novambra teo, ny Gold Amigo Red, zava-pisotro vaovao vokarin’ny orinasa Star. Hita amin’ny tavoahangy 50 cl, ao anatin’ny karazana labiera, sokajy tequila beer, miampy hanitra guarana, zavamaniry avy any Brezila, mahatonga ny lokony ho mena, ahitana tsirona voankazo, somary marikivy. Sahaza ny tanora sy ireo mpankafy lanonana ity zava-pisotro vaovao ity ary tsiahivina fa tsara kokoa ny misotro azy am-pahamendrehana sady tsy tafahoatra.
Nanombohana nanapariahana azy ny toeram-pivarotana sy ny tranombarotra mahazatra, ny toeram-pisakafoana samihafa eto Antananarivo, any Antsirabe, any Mahajanga ary any Toamasina. Hiitatra tsikelikely any amin’ny faritra hafa izany atsy aoriana kely.
Tsiahivina fa efa 28 taona izao ny nivoahan’ny zava-pisotro Gold, ary nivoaka ny taona 2017 ny labiera Gold Amigo, niavian’ny namoronana ny sokajy Red. Midika izany fa tsy mitsahatra mamorona sy manome vokatra vaovao hatrany ny mpanjifa ny Star, nandritra izay 60 taona niorenany izay eto Madagasikara.